Akụkọ - Kedu ihe dị iche n'etiti ihe ngbanwe ụdị mmanụ na ihe ngbanwe ụdị nkụ?
1. Ụdị dị iche iche
1. Ngbanwe ụdị mmanụ: ọhụrụ ụdị nke elu-arụmọrụ transformer na ọzọ ezi uche Ọdịdị na mma arụmọrụ.
2. Ụdị ntụgharị ọkụ: transformers nke ígwè cores na windings na-adịghị emikpu na mkpuchi mmanụ.
Nke abụọ, àgwà ndị dị iche iche
1. Akụkụ nke transformer ụdị mmanụ:
(1) Ndị na-agbanwe ụdị mmanụ na-ejikarị ụzọ atọ dị jụụ: mmanụ na-eme ka ọ dị jụụ, ikuku na-eme ka mmanụ dị jụụ na mmanye mgbasa mmanụ.
(2) Ihe ngbanwe ụdị mmanụ na-ewepụ okpomọkụ site na convection eke mmanụ.Usoro ikuku na-ekpo ọkụ nke mmanụ na-adabere na mmanụ na-eme ka ọ dị jụụ na-eme ka ọ dịkwuo mma, na-agbakwunye onye na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ na tank mmanụ na mmanụ mmanụ na-eme ka mmetụta nke ikpo ọkụ na-ekpo ọkụ.Nkesa mmanye mmanye bụ ịgbanye mmanụ ọkụ dị na transformer na mpụga nke transformer ka ọ dị jụụ, wee ziga ya na transformer.
2. Atụmatụ nke akọrọ-ụdị transformer:
(1) Ọ dị mma, enweghị ọkụ na enweghị mmetọ, enwere ike ịrụ ya ozugbo na ebe ibu;
(2) Nabata teknụzụ dị elu nke ụlọ, ike igwe dị elu, nkwụsi ike mkpụmkpụ mkpụmkpụ siri ike, mwepu obere akụkụ, nkwụsi ike ọkụ dị mma, ntụkwasị obi dị elu na ogologo ndụ ọrụ.
(3) Ọnwụ dị ala, ụda dị ala, mmetụta nchekwa ike doro anya na enweghị mmezi;
(4) Ịrụ ọrụ nkwụsị ọkụ dị mma, ikike ibufe ike, na ịba ụba ọrụ n'oge mmanye ikuku jụrụ oyi;
(5) Ezigbo nguzogide mmiri, dabara adaba maka gburugburu ebe siri ike dị ka iru mmiri dị elu.
The akọrọ-ụdị transformer microcomputer ngwaọrụ nakweere mba dị elu DSP na elu ugwu technology na mgbanwe ubi ụgbọ ala (CAN), nke na-ezute chọrọ nke dị iche iche voltaji larịị nke substation na-aghọta na nchikota, digitization na ọgụgụ isi nke substation.
Ndị na-agbanwe ụdị akọrọ nwere ike mezue ọrụ nke nchekwa substation, nha, njikwa, iwu, akara, ndekọ mmejọ, nnweta ike, nhọrọ ahịrị ala dị ala ugbu a, ịwụfu ibu obere okirikiri, wdg, nke mere na teknụzụ chọrọ, ọrụ na N'ime wiring nke ngwaahịa na-ọkọrịrị.Ihe ngbanwe nke ụdị akọrọ na-anabata ihe nchekwa na ngwaọrụ njikwa nkesa, nke enwere ike itinye ya na etiti ma ọ bụ mebie ya, enwere ike gbanwee nhazi ya n'ụzọ akaghị aka dịka onye ọrụ chọrọ iji mezuo ihe achọrọ nke atụmatụ dị iche iche.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara transformer, ị nwere ike ịlele akụkọ a:Ụkpụrụ ntụgharị